Valve Stem Seal Fekitori - China Valve Stem Seal Vagadziri, Vatengesi
Toyota Car Valve Stem Zvisimbiso China Manufacturer
Car Valve hunde zvisimbiso 90913-02060
Chinyorwa: VITON, FKM
Kurongedza: 8 pcs bhegi rega rega
Nissan Viton YeMotokari Valve Stem Zvisimbiso China Manufacturer
Nissan Viton YeMotokari Valve Stem Zvisimbiso
Kia kudada vharuvhu stem zvisimbiso china manufacturer
Kia Kuzvikudza Valve Stem Zvisimbiso
Chinyorwa: VITON uye NBR
Kushanda: Mushure memusika uye OEM
Mavharuvhu emagetsi emagetsi ndeanopa zviyero zvinotsanangurwa zvemafuta kune vharuvhu yemagetsi yemagetsi epinjini yemagetsi yekuzora giya yevhavha uye kudzikisa mamishini einjini. mavharuvhu esimbi anowanikwa kune dhiziri uye peturu injini uye uye pasina kuwedzera.
GOS inopa kune akajairika magadzirirwo e "mamiriro-e-iyo-art" vharuvhu masitampu emagetsi:
Peugeot Valve Valve Stem Zvisimbiso Seal China Mutengesi
PEUGEOT 405 206 VALVE SEALare zvishandiso zvinopa yakatsanangurwa metering chiyero chemafuta kune vharafu stem interface yemukati injini dzemagetsi kuzora giraidhi giya uye kudzikisa injini mamishini. mavharuvhu esimbi anowanikwa kune dhiziri uye peturu injini uye uye pasina kuwedzera.
Isina-yakasunganidzwa chisimbiso: inozadzisa mashandiro emafuta metering
YeMotokari Isuzu Valve Stem Zvisimbiso Oiri Seal China Mutengesi
Mavharuvhu emagetsi emagetsi ndeanopa zviyero zvinotsanangurwa zvemafuta kune vharuvhu yemagetsi yemagetsi epinjini yemagetsi yekuzora giya yevhavha uye kudzikisa mamishini einjini. Zvisimbiso zveGOS vharuvhu zvinowanikwa kune dhiziri uye peturu injini uye uye pasina kuwedzera.
Motokari uye mudhudhudhu vharuvhu hunde chisimbiso
Materail: FKM / VITON Tembiricha: -40 ～ + 250 ℃ Pressure: pazasi 0.02MPA Rotational kumhanya: pazasi pe10000rpm Valve stem chisimbiso rudzi rwemafuta chisimbiso, icho chinowanzo gadzirwa nekuvhenekesa yekunze furemu uye fluororubber pamwechete. Yekusimbisa-inomesa chitubu kana waya yesimbi yakaiswa panovhurwa radial yechisimbiso chemafuta chekuisa chisimbiso injini vharuvhu gadhi. Iyo vharuvhu yemafuta chisimbiso inogona kudzivirira oiri kupinda mukati mekunwa uye pedza pombi, zvichikonzera kurasikirwa kwemafuta, kudzivirira gasi musanganiswa wepeturu ...